मोरङमा थप तीन कोरोना संक्रमितको मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
मोरङमा थप तीन कोरोना संक्रमितको मृत्यु !
विराटनगर । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मोरङमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको बूढीगङ्गा गाउँपालिकास्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा शुक्रबार थप तीन जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा एक भारतीयसहित तीनजना रहेका छन् । मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिकास्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा दुई र नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरमा एक जनाको मृत्यु भएको हो ।
सोही अस्पतालमा भारतको साहेवगञ्ज घर भएका ७० वर्षीय वृद्धको उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको छ । मृतकलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि उपचारका लागि बुधबार भर्ना गरिएकामा बिहीबार पोजेटिभ रिपोर्ट आएको अस्पतालका प्रमुख देवले बताए ।
नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरमा झापाको गौरादह–८ का ६३ वर्षीय वृद्ध उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ । मृतकलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएकामा बिहीबार पोजेटिभ आएको अस्पताले जनाएको छ ।